जीवनशैली - Rastra Ko News
दुर्लभ भट्टराई । सम्भवत हामी सबैको लागि यो ‘लकडाउन’को अनुभूति पहिलो हो । कयौ पटक अनेकौ बहानामा सडकमा उभिएका हामी नेपालीका लागि कर्फू र नेपाल बन्द त सामान्य भयो तर ...
१६ चैत, काठमाडौ । हास्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल धुर्मुसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन लाग्ने घोषणा गरेपछि क्रिकेट खेलाडीहरु उत्साहित बनेका छन् । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस ...
नवलपरासी, चैत १६ – नवलपरासीको कावासोतीमा निर्माणाधिन पुलबाट जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा सिमेन्ट चोरी भएको छ । कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर १ र देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर ९ जोडने गरी निर्माणाधिन लोकाहाको ...
पोखरा, चैत १५ गते । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडा नं १५ स्थित ठूलीमजुवा द्वारेको खरबारीस्थित ७६८ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता भएको छ । व्यक्तिले कब्जा गरी धमाधम विभिन्न भौतिक ...
काठमाडौँ, फागुन २९ गते । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएका मध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चभएको छ । यही गतिमा ...
नवलपरासी, फागुन २९ – मर्मत सम्भार हुन नसक्दा नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका –५, धौवादी रुद्रपुरमा हावाबाट निकालिएको बिजुलीको उत्पादनमा कमी आएको छ । २०६८ साल पुसमा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक ...
चितवन । पूर्वी चितवनको कयर खोलाबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका २४ मध्ये ११ वटा ट्याक्टर गायब भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरले कयर खोलाबाट नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ...
संसद बैठकमा माननिय सांसदहरुको घिनलाग्दो पारा, यसरी ५ वर्षमा देश कहाँ पुग्ला ?
काठमाडौं । प्रदेश सांसदबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? यसको जवाफ पनि सांसदहरुले नै दिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश नम्बर २ का सांसदहरुले भने संसद भवनभित्र बैठक चलिरहँदा गतिलै ...
हालसम्म पंक्षीमा मात्र लाग्ने गरेको एच-सेभेन-एन-फोर भाइरस बर्ड फ्लु मानिसमा पनि देखिएको छ । विश्वमै पहिलोपटक चीनमा मानिसमा बर्ड फ्लु देखिएको छ । एचसेभेनएनफोर इन्फ्लुयन्जा ए भाइरसको उपप्रकार मानिन्छ । ...